Mubaarak iyo Obama oo ka Hadlay Rabshadaha
Madaxweyne Mubaarak iyo Madaxweyne Obama ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda ka taagan dalka Masar.
Madaxweynaha Masar Xusni Mubaarak ayaa shaaca ka qaaday in uu xilka ka degayo, isaga oo sheegay inaanu doorashada soo socota ka qayb gali doonin.
Mubaarak oo xalay ka hadlay tilifishanka dawladda Masar ayaa sheegay in uu noloshiisa u soo huray dalkiisa iyo dadkiisa.
Tilifishanka Al Jazeera ayaa sheegay in khudbadda madaxweynaha ka dib ay magaalada Alexandria ee waqooyiga Masar isku dhaceen taageerayaasha dawladda iyo dadka ka soo horjeeda.
Dawladda Maraykanka ayaa hore ugu sheegtay Madaxweyne Mubaarak inuusan mar dambe isku sharaxin tartanka doorashada ee sanadkan, waxaana farriintaasi gaadhsiiyay ergayga maraykanku u diray Masar Frank Wisner.
Qaybta hoose ee boggan ka dhegayso faallo iyo waraysiyo ku saabsan khudbadaha labada madaxweyne.